ओलीइतरको जुम मिटिङका रोचक किस्सा : केपीबिरुद्ध अब के चालिएला त कदम? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	ओलीइतरको जुम मिटिङका रोचक किस्सा : केपीबिरुद्ध अब के चालिएला त कदम? » Nepal Fusion
ओलीइतरको जुम मिटिङका रोचक किस्सा : केपीबिरुद्ध अब के चालिएला त कदम?
काठमाडौ २०७७ असोज २८ गते बुधवार
अहिलेको अवस्था कस्तो भने आफ्नो सरकारसँग आफै डराउनुपर्ने, छुसुक्क भेट्यो कि अङ्गरक्षक वा ड्राइभरबाटै रिपोर्टिङ भैदिने, दूरसञ्चार र एनसेलको सिमबाट कुरा ग-यो–रेकर्ड भएर सीधै सरकार प्रमुखसमक्ष कुरा पुग्ने। यस्तो खतरा आइलागेपछि सञ्चार सम्पर्क र सरसल्लाहको विधि अपनाइएको छ– जुम मिटिङको ।
इन्टरनेटमार्फत भिडियो कलको सुविधायुक्त उक्त प्रविधिअन्तर्गत अघिल्लो मंगलबार सचिवालय बैठक डाकिनु दुई दिनअघि आइतबार बिहान नेकपाका खुमलटारनिकट शीर्ष पाँच नेताको जुम बैठकमा भएको रमाइलो संवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पेलाइबारे त्यसदिन नेताहरुवीच के–के छलफल भयो होला त ? किनभने त्यही छलफलको क्रममै उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतम ठुस्किएको थाहा पाएर सम्बन्ध सुधारको लागि बालुवाटारले बोलाएको थियो । र, त्यसयताको सचिवालय बैठक अहिलेसम्म अनिर्णित अवस्थामै छ ।
तीनैजना शीर्षस्थ नेताको कुरोमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सहि थपे । अनि सबैजनाले बहुमत हुँदाहुँदै आफूहरू पछाडि पर्नुमा गौतमले नै मौकामा लत्तो छाडेको विषय उठाए। त्यहि कुरोलाई संकेत गर्दै खनालले भने ‘अब त वामदेव कमरेडले बुझ्नुभयो होला नि !’ माधव नेपाल पनि के कम, ‘तपाईंले हामीसँग एक वचन पनि सोधनी गर्नुभएन। अब भोग्नुस् केपीलाई। तपाईंले मसक्क आँटेको भए अहिले त्यो किस्सा सिद्धिसक्थ्यो’ भनेर पुरानो कुरा छुस्स कोट्याइदिनुभयो ।
जुम मिटिङको बिट मार्ने बेलामा गौतमले फेरि थपे, ‘मैले वहाँलाई पटक पटक सहयोग गरेँ । अब भने थाकिसकेको छु । वहाँलाई मैंले जति सहयोग कसैले गरेको छैन । तर मलाई साह्रै अपमानित गरियो । मेरो केही लागेन । मैले पनि वहाँलाई सुधार्न नसकि निचोड निकालेको छु।’ समाचार स्रोत – जनआस्था साप्ताहिक